Fitsidihan'ny ati-doha ny ati-doha telo amin'ny iray | Reward Foundation
Home Brain Basics Fampandrosoana evolisiona ao amin'ny atidoha
Jereo ity 5 minitra ity Video hahazoana topy maso haingana momba ny faritra sy ny fiasan'ny ati-doha.
Ny iray amin'ireo maodely fanta-daza indrindra amin'ny fahazoana ny firafitry ny ati-doha dia ny fampivoarana ny maodelin'ny ati-doha. Izany dia novolavolain'i neuros Scientist Paul MacLean ary nanjary nanan-kery be tamin'ny 1960. Nandritra ny taona maro lasa izay, na izany aza, singa marobe amin'ity maodely ity no novaina nohavaozina noho ny fandalinana neuroanatomika vao haingana. Mbola ilaina amin'ny fahazoana ny fiasan'ny ati-doha amin'ny ankapobeny. Ny maodelin'i MacLean tany am-boalohany dia nampiavaka ny ati-doha telo samy hafa izay niseho nifandimby nandritra ny fivoarana:
Ity no antitra indrindra amin'ny atidoha. Nivoatra izany tamin'ny 400 millions taona lasa izay. Izy io dia ahitana ireo rafitra fototra hita ao amin'ny atidoha reptile: ny atidoha sy ny cerebellum. Miorina lalina ao an-dohantsika izy io ary mifikitra amin'ny tadin'ny tsipikaingantsika. Izy io dia mifehy ny asantsika fototra tena manan-danja toy ny tahan'ny fo, ny hafanana amin'ny vatantsika, ny tosidrà, ny fisefoana ary ny fifandanjana. Izy io koa dia manampy amin'ny fandrindrana ireo 'hain' roa ao an-dohantsika. Ny atidoha reptiliana dia azo itokisana saingy mihevi-tena ho henjana sy mandefitra.
Ny ati-doha. Antsoina hoe ati-doha mammalian koa izy io
Ny atidohan'andriamby dia mitantana ny rafi-kodin'ny vatan'ny olona. Nivelatra manodidina 250 arivo taona lasa izay ny fivoaran'ny biby mampinono voalohany. Izany dia afaka mirakitra fahatsiarovana ireo fitondrantena izay nahatonga ireo traikefa manaitaitra sy tsy mampino, ka tompon'andraikitra amin'izay antsoina hoe 'fihetseham-po' amin'ny olombelona. Ity dia ampahany amin'ny atidoha izay itiavantsika sy ivelan'ny fitiavana ary fifandraisana amin'ny hafa. Izy io no fototry ny rafitra mahafinaritra na valisoa amin'ny olombelona. Ny sangan'asa, anisan'izany ny olombelona, ​​dia mila mikolokolo ny zanany mandritra ny fotoana fohy, dieny mbola vonona ny handao ny 'akany' izy ireo ary hanokan-tena ho azy ireo. Tsy tahaka ireo biby mpitaingin-tsoavaly izay manapotipotika ny atody sy mipoaka.
Ny ati-doha amin'ny limbika dia ny fipetrahan'ny finoana sy ny fanamelohana omena antsika, izay matetika tsy tonga saina, izay mitaona mafy ny fitondran-tenantsika.
Ny rafitra limbic dia misy ampahany enina lehibe - ny thalamus, ny hypothalamus, ny glando, ny amygdala, ny hippocampus, ny nucleus accumbens ary ny VTA. Ireto ny zavatra ataon'izy ireo.
The thalamus dia mpitan-tsoratry ny atidoha. Ny fampahalalana azo tsapain-tanana (afa-tsy ny fofona) izay miditra ao amin'ny vatantsika dia mankany amin'ny thalamus aloha ary ny thalamus dia mandefa ny fampahalalana ho any amin'ny faritra ampahany amin'ny atidohantsika mba hikarakara.
The hypothalamus Ny habeny kafe dia mety ho ny rafitra manan-danja indrindra amin'ny aterineto. Izy io dia tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny hetaheta; ny hanoanana; fihetseham-po, temitra; firaisana ara-nofo, rhythms circadian (matory) ary ny rafi-pitondrana mahaleotena sy ny endocrine (hormone) rafitra. Ankoatra izany, izy io dia manara-maso ny glandy.
The pituitary dia matetika antsoina hoe 'fitabataban'ny metaly', satria mamokatra hormones izay mifehy ny maro amin'ireo androbe orinasa na hormone hafa. Mitombo ny hormone, ny hormones ho an'ny foza, ny hormonina miteraka tiroida, ny prolactine ary ny hormone Adrenocorticotrophic (ACTH, izay manentana ny hormone ho an'ny adrenalinina, cortisol). Izy io koa dia mahatonga ny hormone ho an'ny hormonina antsoina hoe hormone anti-diéretic (ADH).
The amygdala dia mitazona fahitana fahatsiarovan-tena, fa ny ankamaroany dia miteraka fihetseham-po fototra toy ny tahotra, ny hatezerana ary ny fialonana.
The Hippocampus dia tafiditra amin'ny fanodinana fahatsiarovana. Ity ampahany ao amin'ny atidoha ity dia manan-danja amin'ny fianarana sy ny fitadidiana, ho fampivoarana fahatsiarovam-teny fohy ho an'ny fahatsiarovana maharitra, ary ho fitadidiana ny fifandraisana ara-tontolo iainana eto amin'izao tontolo izao momba antsika.
The Nucleus Accumbens dia mitana toerana lehibe ao amin'ny tambazotra valisoa. Ny fitrandrahana dia miorina amin'ny ankapobeny amin'ireo mpandoa-teny tena ilaina: dopamine izay mampiroborobo ny faniriana, ary ny serotonine izay ahitana ny fihenjanana sy ny fihenanam-po. Maro ny fianarana biby nampiseho fanafody nampitombo ny famokarana dopamine ao amin'ny sehatry ny nucleus, raha ny fampihenana ny an'ny serotonin. Saingy tsy mandeha amin'ny fisorohana ny fanatontosana ny nucleus. Manana fifandraisana akaiky amin'ireo ivon-toeram-pifandraisana hafa izy, ary indrindra indrindra, miaraka amin'ny ventral tegmental area, antsoina koa hoe VTA.
Ao amin'ny atidoha midadasika, eo an-tendron'ny atidoha, ny VTA dia iray amin'ireo ampahany indrindra amin'ny atidoha. Ny neurons of the VTA no mahatonga ny dopamine, izay maniraka ny axonus ho any amin'ny nucleus accumbens. Ny VTA ihany koa dia voan'ny endorphins izay manana solon'arivony toy ny heroin sy ny morphine.
Ny Neocortex / cerebral cortex. Antsoina hoe Neomammalian Brain koa izy io
Io no "atidoha" farany hivoatra. Ny tariby matevina dia mizara ho faritra izay mifehy ny asa manokana. Ireo sehatr'asa samihafa dia mamoaka fampahalalana avy amin'ny fahatsapantsika, ahafahantsika mahita, mahatsapa, mandre ary manandrana. Ny ampahany eo amin'ny cortex, ny cortex frontal na ny forebrain, dia ny foiben'ny fisainan'ny atidoha; Manam-pahefana ny fahaizantsika misaina, manamboatra, mamaha olana, mampiasa fizakan-tena ary mandray fanapahan-kevitra.
Ny voalohany amin'ny neocortex dia nihevitra ny maha-zava-dehibe ny primates ary tonga amin'ny atin'ny olombelona miaraka amin'ireo roa lehibe cerebral hemispheres izay mitana andraikitra lehibe toy izany. Ireo hemispheres ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fitenin'olombelona (c 15,000-70,000 taona lasa izay), fisainana an-tsaina, saina ary fahatsiarovan-tena. Ny neocortex dia mavitrika ary manana fahaizana fianarana tsy misy fetrany. Ny neocortex dia mamela ny kolontsaina olombelona hivoatra.
Ny ampahany vao haingana indrindra amin'ny neocortex izay mivoatra dia ny prefrontal cortex izay nivoatra tokony ho 500,000 taona lasa izay. Matetika izy io dia antsoina hoe ati-doha mpanatanteraka. Izany dia manome antsika mekanisma amin'ny fifehezan-tena, drafitra, fahatsiarovan-tena, eritreritra mandanjalanja, fanentanana ary fiteny. Izy io koa dia miresaka momba ny ho avy, eritreritra stratejika sy lojika ary fitondran-tena. Izy io no 'minder' an'ny atidoha taloha ary mamela antsika hanakana na hametraka ny freins amin'ny fihetsika tsy misy dikany. Ity ampahany vaovao amin'ny ati-doha ity dia ny ampahany izay mbola an-dàlam-pamolavolana mandritra ny fahatanorana.
Ireo ampahany telo amin'ny atidoha, ny Reptilian, Limbic ary ny Neocortex dia tsy mifampiankina. Nanangana fifamatorana maro izy ireo ka nifampikasohany. Ny lalan'ny neculary avy amin'ny rafitra limbic mankany amin'ny cortex, dia mivoatra tsara.
Ny fihetseham-po dia mahery ary mampidina antsika amin'ny lohahevitra tsy mahazatra. Ny fihetseham-po dia zavatra mitranga amintsika mihoatra noho ny zavatra izay tiantsika hatao. Ny ankabeazan'ny fanazavana momba ity tsy fahampian'ny fanaraha-maso ny fihetseham-pontsika ity dia mifandray amin'ny fomba mifandray amin'ny atidoha.
Ny atidoha dia nivelatra toy izany ka mifandray lavitra kokoa avy amin'ny rafitra ara-pihetseham-po mankany amin'ny cortex (ny toerana misy ny fanaraha-maso) raha oharina amin'ny lalana hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihoran'ny fifamoivoizana goavana rehetra eo amin'ny lalambe haingana indrindra mihazakazaka avy amin'ny rafi-koditra mankany amin'ny cortex dia afaka mandroaka ny mangingina mihiaka eo amin'ilay làlana madinika izay mihodina amin'ny làlana hafa.
Ny fiovan'ny atidoha vokatry ny fiankinan-doha dia ahitana ny fihodinan'ny volombava volomparasy (sela nerveau) ao amin'ny taratra voangory ao anaty dingana antsoina hoe 'fitsaboana'. Mampihena ny ati-dalàm-pahefana mankany amin'ny ati-doko izany, ka tsy ho vitanao mihitsy ny miala amin'ny fitondran-tena izay manjary manenjika sy mandreraka izao.
Ny fianarana ny fomba fanamafisana ny korteks prefrontal, ary miaraka aminy ny fifehezan-tena, dia fahaiza-manao lehibe sy fototry ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ny saina tsy voaofana na ny ati-doha tsy mahay mandanjalanja amin'ny fiankinan-doha dia mety hahatratra kely dia kely.